The best ongayenza ukunikela emakethe izivakashi ngokungangabazeki Mediterranean Cruises. Namuhla, ulwandle Cruises ungeyena okunethezeka kodwa iholidi ajabulisayo ngenduduzo okungenakuqhathaniswa ukhetho olukhulu ukuzijabulisa ahlukahlukene. Konke endaweni eyodwa uhambo, ungavakashela emazweni amaningana ezithakazelisayo futhi ubone izinto namasiko amadolobha ehlukene. Zonke uhambo ongenakulibaleka kuzothatha abagibele okunethezeka cruise liner ngemisebenzi emihle futhi mass benza zonke izinhlobo zokuzijabulisa.
Isiqongo kwesizini, lapho uzibophezele Cruises oGwini LweMedithera, kuza ngesikhathi kusukela ekuqaleni kuka-Ephreli kuze kube sekupheleni kuka-October. Eminye imikhumbi ngomkhumbi unyaka wonke kodwa kusukela November kuya kuMashi, Ukukhetha indlela lincane kakhulu. Cruises Iningi zibekwa ngendlela esiyizinsuku 7 kuya ku-14 futhi uthathe indawo emachwebeni emazweni amaningana. Imizila ukuthi aphethwe Mediterranean Cruises zihlukaniswe ngezigaba ezimbili. Eyokuqala yalezi iyona Western Mediterranean, lokhu kuhlanganisa France, Malta, Spain, Tenerife, Tunisia, Morocco nase-Italy. Esinye isigaba Eastern Mediterranean, woza lapha futhi Italy, kulandele Croatia, eGreece, eCyprus, eTurkey, Israyeli nakwamanye amazwe. Cruise ngamunye izifunda e yayo sithakazelise futhi.
Umhlangano omkhulu kunayo yonke imbobo commercial futhi idolobha lesibili ngobukhulu e France, Marseille okwakubhekwa njengokubalulekile esangweni main uye eMedithera. Namuhla Marseille - idolobha agqamile ezithakazelisayo futhi ayeke port yayo kufakwe Cruises eMediterranean Sea. Thobekile maqhugwane abadobi sika side by side nge Villas ukunethezeka edolobhaneni isitayela ephakathi echwebeni ubudala olunothile eseduze eziyinxanxathela ezinkulu. Kwaselwandle esuka eMarseilles eyaziwa kulo lonke elaseYurophu, emkhathini lapho ukhumbuza Odessa. Kulomuzi, ugu olunothile langa amabhishi loku kubanika ematfuba ekufundza iholide elikhulu, kanye ekhuphuka kanye diving. Enye indawo abadumile ogwini, lapho wenze Cruises stop on oLwandle iMedithera - kuyinto Monte Carlo. Lesi sikhungo bubuhle ngenxa isikhundla salo okhethekileko Riviera kuyinto resort ozithandayo, edonsela bangabeki abantu abacebile nosaziwayo.
cruise umzila futhi sidlula Toulon kuyinto base main asolwandle yeFrance, umuzi elizungezwe amagquma kanye izinqaba kubo ngenhloso ethekwini ekhexisayo. Ngaphezu kwalokho eSpain Barcelona yayo enhle. Ukulandela eLisbon, ePortugal, tikwele boulevards, izinqaba ababhishobhi, kubonakala sengathi wenza ukuze sihleli izithombe. Ungakwazi zibabaza enqabeni St George, isikhumbuzo Henry the Navigator, vakashela zasebukhosini, ukubamba a yokunambitha iwayini ethekwini. Okuningi Mediterranean Cruises ithunyelwa Tunisia. Zizwe ukunambitheka kanye nephunga elimnandi Afrika ngaphandle kokushiya iMedithera. Wide boulevards French kuleli dolobha elihle ne zezimbali kanye zikagamthilini. Cruise uDavide uqala futhi aphethe ngokuvamile e-Italy futhi abaningi ngemva wahlala e-Italy ukuze lonke. Kungcono ukuthi ziphume ethekwini Genoa, eduze emangalisa ngasolwandle zokungcebeleka - Roman Riviera, ogwini Ligurian futhi Tuscany inimitable.
Cruises Uyi okukhethekile gourmets, inhlanganisela best of ulwazi zezwe futhi aziphumulele. Libuye ithuba isikhathi esifushane kakhulu sokuba bajwayelane zokungcebeleka ethandwa kakhulu esifundeni, lapho ebona lokhu Kusaphazwa izikhumbuzo emlandweni futhi yokwakha. Kusukela uhlu izimbobo lapho kuziwa ship, kukhona isifiso ukuqoqa ngibe ngiphethe ipotimende nesikhwama useyili kula madolobha fabulous: Athens, Istanbul, Alexandria, Dubrovnik, Genoa, Rome, Marseille, Barcelona, Valletta, futhi ukuhluka akuyona uhlu oluphelele. Uma wayefisa, ungakhetha imizila esifushane ziqondiswa othile, ezithakazelisayo esifundeni.
Yikuphi amazwe falling umbhoshongo?
Manor Baryatinsky, Marino. Izikhangibavakashi eKursk esifundeni
Kwenzekani uma ufaka ibhanana? Indlela yokupheka ubhanana?
Conjunctivitis ekukhulelweni: yini ukuba aphathe?
Sultana amagilebhisi: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka izithelo izitshalo
"Magnesium B6 Forte": yokusetshenziswa. "Magnesium B6 Forte" ekukhulelweni: Izibuyekezo
Tommy Haas: umsebenzi, impumelelo, empilweni yakho
Hungary. Izithombe yezindawo ezinhle kakhulu kuleli zwe
Kanjani ukukhuluma Gopnik? Imithetho yokuziphatha futhi ukuxhumana Gopnik
Amathiphu ambalwa sendlela uhlele isethulo
Ildar Zhandarov, umbhali kanye zaziziningi "Ngezinye kuhlwe": Biography, lokusungula
Kanjani ukuze uthole ezinkulu ukuphakama, isisindo? Kungenzeka yini ukuba umuntu abe mkhulu kunezinhliziyo ubunjalo esingokwemvelo?